Radio Daljir: Siyaasiga waano ma deeqdo ee xisaabtan baa deeqa – Radio Daljir
Radio Daljir: Siyaasiga waano ma deeqdo ee xisaabtan baa deeqa
Abriil 28, 2018 3:00 b 1
Siyaasadda Soomaaliya ee sanadahaan danbe ma aha in ay sii ahaato mid mar kasta kor ka bilaabata, kana bilaabata Madaxweyne (dal ama dowlad) ama Raysal Wasaare. Siyaasadda iyo siyaasiga nafaca lihi waa in uu noqdaa mid ku yimaada hoos-ka-dhis. Waa in uu yahay mid la yaqaan, qof ahaan iyo siyaasad ahaan. Waa in uu taariikh leeyahay. Ma aha in siyaasiga Soomaaliyeed sannad kasta uu cir-ka-soo-dhac noqdo iyo “waa laguu yaqaan” ama “hebel baa wata.”
Siyaasigu waa “shaqotag” loo baahanyahay in la iska hubiyo taariikhdiisa inta aan shaqada loo dhiiban, lana darso daruufaha uu ku koray, wax ku bartey, ku shaqeeyey iyo natiijada shaqadiisa. Taariikhda siyaasiga Soomaaliyeed waa in aysan noqon mid la laalo ama “xalay-dhalay” laga noqdo markii xil loo dhiibo. Haddii uusan raad la raaco laheyn ama uu leeyahay taariikh madow waa mid mudan in la diido.
Siyaasiga Soomaalidu khibrad ahaan iyo aqoon ahaan ha ahaado mid aad u liito, hana u sii dheeraato waddaniyad darro, laakiin siyaasad iyo siyaasi ahaan waxba kama liito siyaasiyiinta caalamka. Xil jaceyl iyo wax walba xalkooda anaa haya waa siyaasad ay ka wada simanyihiin, laakiin waxaa la isku dhaafay, shacabna ku badbaadey, xisaabtan iyo shacab xisaabtama.
Sidee xisaabtan lagu helaa oo faramaroorsiga awoodeed ee siyaasiga looga hortagaa, canshuurta shacabkana loo badbaadiyaa, waa su’aasha maanta taagan.
Sidaas darteed aan u laabano hoos-ka-dhis iyo sidee loola xisaabtamaa siyaasiga Soomaaliyeed, siiba kan si toos ah loo arki karo waxqabadkiisa ama waxqabad la’aantiisa, sida Guddoomiye Degmo?
Si shacabku ay u xisaabtamaan waa in marka hore la helaa warbaahin xor ah, karti leh, soona bandhigta xisaabtanka shacabka, daaha ka rogta waxqabadka iyo waxqabad la’aanta siyaasiga.
Haddaba maxaa ugu yar oo laga filan karaa in Guddoomiye kastaa uu subax walba ku hawlgalo? Aan ku biloowno tusaalayaasha hoose:
Waa in uu hayaa tirokoob shaqaalaha degmada
Waa in uu hayaa tirakoobka ganacsiga deegaanka
Waa in uu hayaa tirakoobka canshuur bixiyaha iyo kan aan bixin
Waa in uu hayaa sawir ama khariirad magaaladiisa iyo jidadkeeda, laami, jid bacaad, iyo magaca mid walba
Waa in uu hayaa tirakoobka guryaha magaalada, hoy iyo ganacsi
Waa in uu hayaa tirkoobka shatiyada aan dhicin iyo kuwa dhacay, ganacsi iyo kuwo gaadiidba
Waa in uu hayaa liiska maxaa qabsoomay shalay, maxaa se miiska saaran maanta iyo berri
Waa in uu leeyahay xafiiska xisaabi-xil-maleh oo la sii xisaabtama canshuur aruriyaha degmada
Waa in uu bil walba soo horfariisto warlaliska shacabka, oo warbixin hormarka la hiigsanayo iyo dib-u-dhacaba uu shacabkiisa la qaybso, kana jawaabo su’aalahooda
Waa in uu noqdaa mid xafiiska shaqada laga helo, oo aan hanjabaad iyo xarig isugu darin kii weydiiya, “Guddoomiye xafiiska goormaa lagaa helaa, maxaad se ku qabatey canshuurtii shacabka?”
Guuddoomiyihii ugu yaraan intaas kore ku hawlgala, waana farakutiris, waa mid diyaar u ah in uu dadkiisa hoggaamiyo. Waa mid diyaar u ah in deeegaankaas kooban ee lagu aaminey uu hormar u horseedo. Waa mid hoggaanka berri lagu aamini karo.
Waa hoggamiye taariikh la tixraaco yeelanaya, diyaarna u ah in uu fuulo jaranjarada hoggaaminta.
Laakiin Guddoomiyihii laga arki waayo fulin hawshii loo igmadey, ha ahaato aqoon xumo ama khibrad la’aan aad u liidata, waa mid mudan in lagala xisaabtamo. Sidoo kale waa mid mudan in lagula xisaabtamo hoggaanka sare ee booskaas uusan u qalmin ku aaminey, waana tilmaan muujineysa in hoggaanka sare uusan dan ka laheyn hormar dad iyo mid deegaan. Waa mid muujineysa in labada hoggaanba ay shaqotag yihiin. Waa mid shacabka u sheegaysa in af iyo uur aysan islaheyn.
Sidaas darteed, si hormar loo hiigsado, looga gudbo xisaabxumada raagtey ee Soomaali ku habsatay, waa lagamamaarmaan in dadka loo soo shaqotagey ay xisaabtaamaan, la xisaabtamaan siyaasiga, darajo kasta oo uu huwanyahay.
Haddii aan shalay xoogga saarney hoggaanka sare, maanta aan u soojeesano hoggaanka degmo, oo aan barano sida loola xisaabtamo hoggaanka berrito.
…………………………………………….. >>>> … <<< ……………………………………………..
FG: Xisaabtanka shacabka kala soco barnaamijka Muuqaalka Bulshada ee Radio Daljir. Fikirkaaga iyo falceliskaagana nala qaybso oo nagala soo xiriir emailka: [email protected] ama farriin noogu soo dir Shimbirta Radio Daljir
Maqaalo Kale 245 Qormooyinka Daljir 42 Wararka 17236
Wacaal daray ah: Qarax ismiidaamin oo Gaalkacyo ka dhacay
cabdiqaadir 2 years
Waxaan aad uga helay faalada la xisaabtanka siyaasiga.
Runtii waxaa ka muuqata qormada aqoon iyo farshaxanimo qurux badan
Mahadsanidiin bahda #daljir
U Jawaab cabdiqaadir Buri halceliska